वेटरबाट गायिका बनेँ : गिरी - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
वेटरबाट गायिका बनेँ : गिरी
प्रकाशित: २० मंसिर २०७२, आईतवार
कसको होला छोरो, कुन संसारमा जाऊँ जस्ता गीतले चर्चामा आएकी गायिका मिरा गिरी यतिबेला खरबारीमा बोलको गीतबाट चर्चा बटुल्दैछिन् । गाइघाट, कटारी नपा ७ उदयपुर घर भएकी गायिका मिरा गिरी यतिबेला लोकदोहोरीमा चर्चा बटुल्ने क्रममा छिन् । दोहोरी साँझमा वेटर बन्दै आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दै आएकी मिरा गिरी यतिबेला भने व्यवसायिक गायिकाको रुपमा कार्यरत छिन् । वेटरबाट गायिका बनेकी यिनको सानैदेखि लक्ष्य नै गायन थियो । म्यूजिक खबरका लागि समुन बैरागीले गायिका मिरा गिरीसँग गरेको कुराकानीः
कहिलेदेखि गायनमा लाग्नुभयो ?
चार वर्ष भयो । सुरुको गीत लाग्छ तिम्रै भर आफ्नै शब्दमा नरेश वियोगीको शब्द थियो । जसमा मैले र रामजी खाँडले स्वर दिएका थियौं ।
यो क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
पहिला दोहोरी साँझमा वेटर गर्थें । स्टेजमा अरुले गाएको देख्दा म कहिले यस्तो गाउन सक्ने हुने होला भन्ने लाग्थ्यो । धेरै दुःख गरियो, अहिले त्यो सपना बल्ल पूरा गर्न लागेको छु जस्तो लागेको छ । अझै धेरै मेहनत गर्छु र योभन्दा माथि लाने प्रयास गर्नेर्छु ।
पूर्वको मान्छे पश्चिमको दोहोरी गाउनुहुन्छ ?
मेरो बाल्यकाल नै काठमाडौंतिर नै बित्यो । काठमाडौंको बसाईले मलाई पश्चिमेली लोकदोहोरीतर्फ तान्यो । साथीहरु पनि पश्चिमेली नै भेटिए । पूर्वको संगत खासै भएन । त्यसैले पश्चिमेली दोहोरी गाइयो, अब छिट्टै पूर्वका लोकगीतहरु पनि गाउने सोच लिएको छु ।
एउटा गायिका हुन के आवश्यक पर्छ ?
गायिका हुनका लागि सबैभन्दा पहिला कला हुनुप¥यो अनि साथमा पैसा पनि । त्यसपछि परिवारको सपोर्ट ।
आधुनिक तुलनामा लोकदोहोरीमा मेहनत कम हुन्छ भनिन्छ साधना कत्तिको गर्नुभएको छ ?
मैले साधना गरेकी नै छैन । गर्नुपर्छ, धेरै सिक्नुपर्छ । मनमा उत्साह आयो भने हुन्छ । लोकतिर लाग्नेको आधुनिकमा खासै टोन जाँदैन । अहिलेसम्म साधनाबिनै गाइरहेकी छु ।
संगीतमा निपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ?
अवश्य लाग्छ पछि तर त्यसलाई म गर्नेछु । निपूर्ण भएर एकदिन सबैखाले गीत गाउने सोचेको छु ।
दोहोरी गायिका व्यवसायिक बन्नका लागि के आवश्यक पर्छ ?
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कला नै हो ।
तपाईंका चलेका गीत ?
कसको होला छोरो – न त कालो न गोरो, म छु परेदेशमा, खरबारीमा, कुन संसारमा जाऊँ जस्ता गीत मेरा चलेका गीत हुन् ।
कमाईले दिनचर्या चलेको छ त ?
चलिरहेको छ, कमाई राम्रै छ, स्टेज कार्यक्रम राम्रो पाइरहेको छु । आफूलाई बाँच्न पुग्ने कमाएको छु ।
गायिका नभएको भए ?
सानैदेखि सोच त गायिका बन्ने नै थियो, स्कुलमा पनि पढ्ने भन्दा गाउनमै मन लाग्थ्यो । यदि गायिका नभएको भए जनताको सेवक हुन्थे । सानैदेखि प्रहरीतिर लाग्ने सोच बनाएकी पनि थिएँ ।
सबैभन्दा खुशी क्षण ?
स्टेजमा धेरै गीत गाइयो चिन्दैनथे । रेकर्डमा पनि धेरै नै गाएँ तर ‘कसको होला छोरो…’ भन्ने गीत गाएँ धेरैले चिने बल्ल खुशीको दिन आएको छ । गायनमा लागेर बाँच्छु भन्ने दिन आएको छु ।
गाउने अवसर कसरी
म निरमाया दोहोरीमा गेष्ट भएर धाउँदाधाउँदै गायिका बन्ने अवसर मिलेको हो । गायिका बन्न धेरै मेहनत धेरैको सपोर्ट छ । अहिले प्रतिष्ठानको सदस्यसम्म छु ।
दोहोरीमा लाग्नेहरु ग्ल्यामर हुन्छन् रे नि ?
मसँग त्यस्तो ग्ल्यामर हुने सोच छैन, म त मेरो नेपालीपन भएकी नारी बन्न रुचाउँछु ।
गीतसंगीतमा छाडपन नभए चल्दैन भनिन्छ नि ?
त्यो बढी स्मार्ट हुन खोजिएको हो । तर गीतसंगीतमा मौलिकता नै हुनुपर्छ सभ्य गीत नै पछिसम्म चल्छ ।
पछिल्लो समय आएको खरबारीको चर्चा कस्तो छ ?
सोचेको भन्दा राम्रो पाएकी छु । धेरैतिरबाट राम्रै प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।
विहे कहिले गर्ने ?
अहिलेसम्म छैन । विहेको त्यो दिन आउनेछ जुन दिन गीतसंगीतमा सफल हुनेछु ।
मन परेको गायक ?
बद्री पंगेनी, पहिलादेखि नै मन पथ्र्यो ।
आफूलाई सबैभन्दा बढी मन पर्ने ?
ड्रसअपको सौखिनु छु ।
बीमा कुमारी दूरा ।
अहिलेसम्म सुनेकामध्ये मन पर्ने गीत ?
विमा दूराले गाएको बनको काफल बनकै चरीलाई ।